IAshton House Ranong Indlu yaBucala enejacuzzi 2
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguChonlawit
Igumbi elinye Igumbi lokuhlambela elinomgangatho we-villa kunye ne-jacuzzi yabucala yangaphandle iyarentwa kwisixeko saseRanong,.Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo.
I-Ashton House Ranong yenzelwe isimbo sasekhaya.
Ifakwe kwi-10-imizuzu ngemoto ukuya kwi-Hot Springs (i-Raksawarin Hot Springs mhlawumbi iyindawo ekhangayo ethandwa kakhulu kwiphondo laseRanong.)Kufuphi ne-villa, ekuhambeni umgama, kukho iindawo zokutyela ezininzi ze-thai kunye nevenkile (7-11 Shop),
Kukho i-jacuzzi yangaphandle, amagumbi amabini okulala atofotofo aneebhedi zeKing size kunye negumbi lokuhlambela labucala.
Igumbi lokuhlala lidibene nekhitshi kwaye lihlala kwigumbi elahlukileyo. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo.
1 umzuzu ukuya KHAO HOM RESTAURANT ( Indawo yokutyela yaseThai)
2 imizuzu ukuya 7-11 Shop
imizuzu emi-5 ukuya (i-Raksawarin Hot Springs Raksawarin)Imithombo eshushu inokuba yeyona nto inomtsalane idumileyo kwindawo ekufutshane yedolophu yaseRanong.
Imizuzu eli-10 ukuya echwebeni (hamba nge-snorkeling kwiSiqithi saseMyanmar)
Imizuzu eli-12 ukuya eRattanarangsan Palace
Imizuzu eli-15 ukuya kwiPaki yeSizwe iNgao
Imizuzu eli-15 ukuya kwizibuko ukuya eKoh payam
Imizuzu engama-20 ukuya kwiTempile yeBan Ngao
Imizuzu engama-25 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseRanong
- 5 imizuzu ukusuka Rakswarin Hot Springs (Ranong).
- 2 imizuzu Ukusuka lula Gcina ngokuhamba.
- 12 imizuzu ukusuka Light House Pier ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Chonlawit
Xa ulapho unganditsalela umnxeba, ngeposi okanye nge (Ifihlwe nguAirbnb) ngazo zonke iimfuno ezinokwenzeka usazi ukuba ndihlala ngaphantsi kweemitha ezingama-800 ukusuka eVilla. Ndingakunika uncedo olukhawulezayo noluthembekileyo
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$90